Sida loo Degsado Sheekooyinka Instagram Deg Deg ah oo Fudud - Hababka 2022 | Golaha Moobaylka
Sida loo degsado sheekooyinka Instagram si dhakhso ah oo fudud
Ciise Sanches | | Shabakadaha Bulshada
Qof kastaa wuxuu leeyahay Instagram, laakiin qof kastaa ma garanayo sida looga faa'iideysto. Shaki la'aan, waxyaabaha ugu badan ee aan qabanno waa daabacaadda sawirro iyo sheekooyin. Maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno sheekooyinka iyo sida loo soo dajiyo adigoo raacaya dhowr talaabo oo fudud.
Instagram waa aalad fantastik ah, mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu isticmaalka badan adduunka. Malaayiin sawir iyo sheekooyin ah ayaa loo soo geliyaa shabakada maalin kasta oo waqtiga sii socota haddii aan la tirtirin. Si kastaba ha noqotee, Sheekooyinka Instagram waxaa la heli karaa oo keliya 24 saacadood.
Maanta waxaan kuu keenaynaa a khiyaamo inaad awood u yeelato inaad keydiso dhamaan sawiradaas iyo fiidiyowyadaas oo aadan rabin inaad ku baaba'aan 24 saac gudahood oo aad rabto inaad ku keydiso qalabkaaga. Maanta waan sharaxeynaa sida loo soo dejiyo sheekooyinka instagram.
1 Sida looga soo degsado sheekooyinka Instagram taleefankaaga casriga ah
2 Miyaan kala soo bixi karaa sheekooyinka Instagram isticmaale kasta?
3 Codsiyada ugufiican ee lagu soo dejiyo sheekooyinka Instagram
3.1 Loogu tala galay Android
3.1.1 Dib u dhig! Keydso oo Repost u soo dhig Instagram
3.1.2 Sheeko Saver
3.2 Wixii iphone
3.2.1 Sheekada Sheekada ee 'Instagram'
3.3 Sidee loo adeegsadaa barnaamijyadan?
4 Sida looga soo degsado sheekooyinka Instagram kombiyuutarka
5 Sida loo soo dejiyo sawirada iyo fiidiyowyada barta 'Instagram'
6 Shaashadda ama shaashadda shaashadda, habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan
Sida looga soo degsado sheekooyinka Instagram taleefankaaga casriga ah
Codsiga Instagram ee loogu talagalay Android iyo iOS ma ogola download toos u soo rar sawiradas isticmaalayaasha kale, laakiin kuweenu waa. Marka sideen u qaban karnaa? Mahadsanid codsiyada in aan ka heli karno Google Play iyo Apple Store.
En Google Play waan heli karnaa codsiyo aad u tiro badan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan kala soo baxno sheekooyinka Instagram isticmaaleyaasha kale. Kaliya waxaa lagama maarmaan u ah in lagu raadiyo ereyada soo socda: «Soo dejiso Instagram» ama «Sheeko badbaadiyaha». Gudaha Apple Store isku mid, waxaan raadineynaa shuruudo hore waxaanan kaheleynaa liis balaaran.
Miyaan kala soo bixi karaa sheekooyinka Instagram isticmaale kasta?
Nasiib darrose, ma awoodno inaan kala soo degno sheekooyinka isticmaale kasta shabakadda Instagram. Si taas loo sameeyo, kiisaska soo socda waa in lala kulmaa:
Xogta dadweynaha: HAA waad soo dejisan kartaa sheekooyinka Instagram.
Xog gaar ah: MAYA waad soo dejisan kartaa sheekooyinka Instagram.
Codsiyada ugufiican ee lagu soo dejiyo sheekooyinka Instagram
Loogu tala galay Android
Dib u dhig! Keydso oo Repost u soo dhig Instagram
Waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran ee loogu talagalay Android. Waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino sheekooyinka wakhti kasta iyo cinwaan kasta ka dibna ku keydinno qormadeenna moobiilka. Noo ogolaada wada shaqeyn koontadayada 'Instagram' oo aan awood u yeelan karno inaan ku soo rogo sheekada la soo dejiyey boggayaga.
Sida tii hore, waxay noo ogolaaneysaa inaan ka keydinno sheekooyinka Instagram astaan ​​kasta, ha ahaato midkeenna ama qof kale. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaataa samee dib u dhig sheekooyinka isticmaaleyaasha kale isla markaana ugu soo dheji bartayada 'Instagram' si deg deg ah.
Codsigan wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo ku saabsan barnaamijka Instagram, kuwaas oo ay noo ogolaaneyso soo dejiso sheekooyinka Instagram hab aad u fudud oo dhakhso leh.
Sheekada Sheekada ee 'Instagram'
Sida tii hore oo kale, codsigan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka helno sheekooyinka Instagram adeegsade kasta oo ka tirsan shabakada bulshada isla markaana aan si fudud ugu badbaadinno qormadeena. Waxay kaloo noo ogolaataa iyaga shidaal in our profile.
Sidee loo adeegsadaa barnaamijyadan?
Farsamaynta codsiyadaani waa kuwo aad u fudud: la wadaagista sheekada aan rabno inaan ku soo dejino arjiga tanina waxay mas'uul ka noqon doontaa inaad ku soo dejiso qalabkeenna. Si tan loo sameeyo, waa inaan raacnaa talaabooyinkan fudud:
Waxaan furaynaa mid kamid ah codsiyada aan kor kusoo xusnay.
Waan furannaa Instagram oo guji duufaanka su’aal
Waxaan gujineynaa saddex dhibic ee ka muuqda geeska kore ee midig ee shaashadda oo guji «nuqul xiriiriyaha«.
Waxaan ku dhajineynaa iskuxirka arjiga oo guji download.
Diyaar garow, waxaan horeyba uheysanay waxa kujira sheekada Instagram ee galkeena.
Our talinta inaad kala soo baxdo codsi noocan ah ayaa ah HA isku qorin xisaabtaada Instagram (Waxaad halis u tahay asturnaantaada), si fudud u keydi sawirrada adigoon ku xirneyn astaantaada 'Instagram'.
Sida looga soo degsado sheekooyinka Instagram kombiyuutarka
Waxaan u fidineynaa xalal dhammaan isticmaaleyaasha, taasi waa sababta aan sidoo kale u tixgelinno kuwa doonaya inay ka soo dejistaan ​​sheekooyinka Instagram kombiyuutarka. Si taas loo sameeyo, waa inaan marin u hesho mid ka mid ah bogagga soo socda ama adeegyada tooska ah ee noo oggolaanaya inaan sheekooyinka ka soo dejino biraawsarka:
Gramvio si dhakhso leh oo fudud ayuu u shaqeeyaa waana mid aad waxtar u leh. Noo ogolaada ku soo dejiso sheekooyinka instagram ilbiriqsiyo, labadaba fiidiyowyo iyo sawirro. Si taas loo sameeyo, waxaan raaci doonaa talaabooyinkan fudud:
Waxaan galnay Websaydhka Gramvio.
Waxaan dhajinaa ama qornaa magaca isticmaale ee 'Instagram' kaas oo aan dooneyno inaan kala soo baxno duufaanka.
Sheekooyinka 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa soo muuqan doona.
Guji guji sheekada aan dooneyno waana intaas.
Fadlan la soco taas Ma awoodi doontid inaad ku soo dejiso sheekooyinka isticmaalaha astaanta gaarka ah.
Waa aalad khadka tooska ah noo saamaxaysa inaan ka soo dejino sheekooyinka 'Instagram' isla browser, iyada oo aan la soo degsan wax dalab ah. Sifudud waxaan galnay xiriiriyaha sheekada oo guji Download. Daaqad ayaa ka furi doonta meesha aan kari karno download duufaanka ama mari xoogaa shaandho ah ka hor intaadan sameynin.
Sida loo soo dejiyo sawirada iyo fiidiyowyada barta 'Instagram'
Waxaa laga yaabaa inaad naftaada weydiiso waxyaabaha soo socda: Marka lagu daro sheekooyinka, sidoo kale ma sameyn karaa soo dejiso sawirrada iyo fiidiyowyada 'Instagram' barnaamijyadan? Jawaabta waa haa. Qaabku wuxuu la mid yahay sheekooyinka Instagram: dhagsii saddexda dhibic ee muuqaalka ama fiidiyowga, nuqul xiriiriyaha oo ku dhaji arjiga si aad u soo dejiso.
Laakiin haddii aadan rabin inaad kala soo baxdo barnaamijyo ama barnaamijyo, qoraalkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo soo dejiyo fiidiyowyada 'Instagram' barnaamijyo la'aan.
Shaashadda shaashadda o Screenshot, habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan
Hadday tahay fikradda ah inay leedahay soo dejiso barnaamijka-saddexaad Si aad uga soo degsan karto sheekooyinka dadka kale, waxaad had iyo jeer adeegsan kartaa habka dhaqanka, ugu dhaqsaha badan uguna fudud: shaashadda ama shaashadda.
Natiijadu isku mid ma noqonayso marka loo eego midka na siinaya codsiyada hore, maaddaama sawirka aan soo qabanayno, canaasiirta duufaanka "wasakhda ah" sawirku ka muuqan doono (magaca isticmaalaha, X, saddexda dhibic, "farriinta dir", iwm).
Si aad ugu qaadato shaashadda moobilkaaga, waa inaan raacnaa talaabooyinkan fudud:
Iyadoo qalab Apple, isku mar riix furaha qufulka / qufulka iyo furaha kor u kaca.
Iyadoo qalab Android, riix badhanka isla waqtigaas awood / quful iyo mug hoos hoos isla markaa. Haddii taasi noo shaqeyn weydo, waxaan riixnaa oo qabannaa badhanka korontada xoogaa ilbiriqsiyo ah ka dibna riix «Screenshot».
Sidaad u aragto, waad soo degsan kartaa sawirro, fiidiyowyo iyo Sheekooyinka 'Instagram' ama 'Sheekooyinka' waa kuwo aad u fudud. Si fudud waa inaad raacdaa talaabooyinka aan kor ku soo xusnay iyo voila, waad keydin laheyd walxahaas hadaadan sameyn laheyn, waxay ku baaba'een 24 saacadood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Sida loo degsado sheekooyinka Instagram si dhakhso ah oo fudud
Barnaamijyada iyo dejimaha si loo hagaajiyo arimaha gaarka ah ee Android